Halisyada wararka ee magaalooyinka adduunka oo dhan ka yimaada isticmaaleyaasha | Qalabka Saxaafadda Bulshada - Avalanches.com
Mar horeba waa la diiwaangaliyay? Gal
Ama la gal
Marka aad saxiixdo, waxaad ku raacsan tahay: Shuruudaha adeegga iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, waxaa ka mid ah isticmaalka Kukiyada.
Ma ilowday furahaaga sirta ah?
Xisaab ma leh? Saxiix
4 lambar nambar
Gali nambarka si aad usii wado
Warqaddu waxay ku geli kartaa spam
cached Isku day
Iskudaygii waa tagay:
kadib 60 sak
Lambarkan mar hore ayaa la adeegsaday
Soo celi akoonkiiagii hore
AVALANCHES Dib u dejiso lambarkaaga sirta ah
Nala soo xiriir Waad ku mahadsantahay dalabkaaga
Waanu ka baaraandegi doonaa codsigaaga oo dhawaan ayaan kula soo xiriiri doonaa
Saxiix Soo gal
Sidee u shaqeysaa? Tilmaamaha Platform Fursadaha yaa loogu talagalay madashan?
Avalanches waa madal wareed cusub
halkaas oo aad ka heli karto wararkii ugu dambeeyay warbaahinta rasmiga ah, ka abuurto wararka gudaha oo kordhiso tirada macaamiishaada firfircoon.
Avalanches waa goob gaar ah, hal abuur leh oo u oggolaanaysa isticmaale kasta inuu helo dhammaan wararkii ugu dambeeyay ee magaalo yar oo miyi ah ilaa adduunka oo dhan.
Isdiiwaan gelinta ka dib, waxaad samayn kartaa qoraalo oo aad sharaxi kartaa dhammaan dhacdooyinka ka dhacaya magaaladaada oo aad ku soo bandhigi kartaa quudinta isticmaaleyaasha adduunka oo dhan.
Ma jirto baahi loo qabo in la isticmaalo tiro badan oo ka mid ah boggaga wararka, ururiyeheennu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto wax kasta oo kheyraad kastaa ku sii daayo hal meel.
Weligood may fududayn in la shaandheeyo oo war la raadiyo. Avalanches waxay u ogolaataa qoraa kasta inuu macluumaadka u gudbiyo dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah, inay ka helaan jawaab celin bulsho firfircoon oo ay ku soo bandhigaan qoraaladooda quudinta adduunka.
Waxaad ku abuurtaa daabacaad wareed feed-goboleedka magaaladaada.
Helitaanka dhaqdhaqaaqa isticmaalayaasha, qiimaynta daabacaadaadu way korodhaa.
Daabacaadda ayaa u dhaqaaqday heer sare, iyada oo gelaysa quudinta ugu sareysa dalka.
Ka dib, iyadoo ay aad ugu mahadcelinayaan akhristayaasha waddankaaga, daabacaadaadu waxay noqon kartaa cinwaan wareed heer caalami ah, oo galaya quudinta caalamiga ah ee isticmaalayaasha Avalanches.
Cadaalad (Guddiga Kala Saarida)
Abuur liisaska oo iibi alaab, bixi adeegyo ama dukaan oo hel khabiirada aad u baahan tahay. Qaybo badan ayaa sahlaya raadintaada waxayna kaa caawinayaan inaad hesho waxa aad raadinayso!
Burburku wuxuu muujinayaa saadaasha cimilada saxda ah ee magaalada aad degan tahay. Saadaasha cimiladu had iyo jeer waa la heli karaa waana lagu arki karaa isla markaad gasho goobtayada.
Ilahayaga ayaa siiya isticmaalayaasha awooda ay ku abuuraan kooxo iyo bulshooyin. Wadaagista macluumaadka iyo kala xaajoodka dhacdooyinkii u dambeeyay dadka ay isku mawqifka yihiin ayaa noqotay mid waligeed ka sahlan.
U beddelo quudinta wararka ee kala duwan: mid ka mid ah magaaladaada, waddankaaga, adduunka, iyo quudinta shakhsi ahaaneed. Wararka waa la kala soocay iyadoo ku xiran goobtaada. Intaa waxaa dheer, isticmaale kastaa wuxuu abuuri karaa shaandheyn shakhsi ah isagoo dooranaya magaalooyinka, warbaahinta iyo kooxaha, isaga oo iska diiwaan gelinaya cusbooneysiintooda, taas oo aan kuu oggolaan doonin oo kaliya inaadan ku lumin wakhtigaaga gaarka ah raadinta cinwaannada wararka ee loo baahan yahay, laakiin sidoo kale inaad isla markiiba aragto dhammaan wararka adiga. aad xiisaynayso xaqa quudintaada gaarka ah.
Abuuritaanka iyo qaybinta nuxurka
La wadaag macluumaadka, dhis daawadayaasha, ka dood mawduucyada muhiimka kuu ah, oo la wadaag warbaahinta badan bulshada dadkaaga. Waxaas oo dhan leh fudud, tafatire qoraal dareen leh oo had iyo jeer ku jira caarada farahaaga.
Akhri kaliya macluumaadka khuseeya
Baadh oo rukumso warbaahinta rasmiga ah oo akhri kaliya wararka lagu kalsoonaan karo ee ilaha sumcadda leh ee quudintaada maalin kasta. Ku raaxayso dhammaan ilaha aad ugu jeceshahay hal meel oo ka hel wararka adduunka oo dhan, luqadaha oo dhan iyo gabi ahaanba bilaash.
Ku biir bulshooyin cusub oo samee kuwo adiga kuu gaar ah
Shaqada kooxeedyadu waxay kuu ogolaanaysaa inaad abuurto urur, ganacsi, ama bog bulsho oo mawduuc ah meel kasta si aad u hesho mid dabiici ah oo loogu talagalay dhagaystayaasha aad beegsanayso. Soo hel dadka aad isku fikirka ah oo kala hadal waxa muhiimka kuu ah madal cusub, ku habboon oo qurux badan.
yaa loogu talagalay madashan?
Avalanches waa kheyraad gaar ah oo loogu talagalay qorayaasha kaas oo kuu ogolaanaya inaad ugu dhawaato dhagaystayaashaada intii suurtogal ah. Tan waxaa lagu gaaraa shaandhada goobta - isticmaale kasta oo diiwaangashan wuxuu samayn karaa qoraallo ku saabsan dhacdooyinka ka dhaca gobolkiisa wuxuuna ka heli karaa jawaab celin isticmaalayaasha kale ee xiiseynaya. Thanks to habkan, qoraa kastaa wuxuu ururin karaa daawadayaasha xiisaha leh oo si dhakhso ah u ballaarin kara, faafinta macluumaadka ku saabsan wararka iyo dhacdooyinka khuseeya.
Avalanches waa goob uu qof kastaa ka ogaan karo dhammaan dhacdooyinka adduunka. Bal qiyaas: dhammaan wararka, laga bilaabo maxalli ilaa adduunka, hal bog oo wararka ah. Isku duwaha warbaahintu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka ogaato wararka ugu dambeeyay ilo rasmi ah, iyo quudinta wararka maxaliga ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad akhrido dhacdooyinka kala duwan si toos ah.
Avalanches waa kheyraad cusub, gaar ah oo loogu talagalay abuurista iyo akhrinta wararka, una adeega isticmaalaha sidii qalab cusub oo lagu kala weydaarsado macluumaadka. Ku dhex dhexaad dhacdooyinka oo dhan: ka hel war goobjoogayaal, la soco wax kasta oo hareerahaaga ka dhacaya oo u qor dhagaystayaashaada!
Ku samee meel cusub oo macluumaad leh Avalanches hadda.
Khariidadda goobta Khariidadda goobta Isticmaalayaasha Khariidadda Goobta Magaalooyinka khariidad Cadaalad (Guddiga Kala Saarida) Saadaasha cimilada dhammaan magaalooyinka Adduunka
Avalanches © 2021 . All Right Reserved Shuruudaha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Kukiyada gaarka ah Nala soo xiriir